बक्स अफिस लागू भएको दुइहप्ता वित्यो, खै त डाटा ? - Sagarmatha TV Sagarmatha TV
बक्स अफिस लागू भएको दुइहप्ता वित्यो, खै त डाटा ?
१७ श्रावण २०७५, बिहीबार ०३:४१
काठमाडौं । लामो समयदेखि नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा चर्चाको विषय बनेको बक्स अफिस काठमाडौं उपत्यकामा लागू गरिए पनि यसको कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको । बक्स अफिस लागू भएको दुई साता भन्दा बढीको समय वितेपनि यो बीचमा प्रदर्शनमा आएका चलचित्रको हिसाब–किताव कति हो ? जानकारी आउन सकेको छैन ।
पछिल्लो समय प्रदर्शना आएका चलचित्रले पुरानै शैलीमा आफ्नो चलचित्रले यति कमायो, उति कमायो भनेर हल्लाकै भरमा चलचित्रको कारोबार सार्वजनिक गरेका छन् । बक्सअफिस कन्सल्टेन्ट मनिष पण्डितले भने अहिले नै फिल्मको लाइभ डाटा हेर्न असम्भव रहेको बताए ।
उनले विभिन्न चरणमा काम भइरहेको दाबी गर्दै भने–‘डाटा टेस्टिङ प्रक्रियामा छौं । कार्यान्वयनमा समस्या भएको होइन । त्यसैले केही समय लागेको मात्र हो ।’ उनका अनुसार हलबाट प्राप्त हुने डाटा सही हो कि होइन ‘भेरिफिकेसन’ गर्न आवश्यक छ । ‘वितरक, निर्माताको चित्त बुझायौं । अब सही तथ्यांक सबैसँग हुन्छ ।
त्यसबारे जानकारी दिने नदिने निर्माताको निर्णयमा भरपर्छ ।’ उनले थपे– ‘हाल बिक्री भएको टिकट संख्या प्रत्यक्ष हेर्न मिल्दैन । तर, निर्माताहरुले शो सकिएपछि भएको सम्पूर्ण हलको कलेक्सन रिपोर्ट प्राप्त गर्छन् । इन्टरनेट, बिजुली लगायत भौतिक आवश्यकता पूरा भएपछि र केही प्राविधिक काम सकिएपछि लाइभ डाटा हेर्न सकिने उनले दाबी गरे ।
साउन १ गतेबाट राजधानीका २० हलमा बक्सअफिस लागू भएपछि राहत महशुस गरेका निर्माताहरु भने बक्स अफिस लागू भएको शुरुवाती चरणबाट सन्तुष्ट बन्न सकेका छैनन् ।
बक्स अफिस लागू भएपछि निर्माताहरु हलवाला र वितरकको ठगाईमा नपर्नेमा विश्वास उनीहरुले लिएको भए पनि काम तीव्र रुपमा नहुँदा पुरानै शीली दोहोरिनेमा उनीहरुले आशंका गर्न थालेका छन् । बक्स अफिस प्रणाली लागू भएपनि निर्माताहरुले आफ्नो फिल्मको लाइभ डाटा हेर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
बक्स अफिस लागूभएको दुई साता बढी समय भयो । यो बीचमा ६ वटा नेपाली फिल्म सार्वजनिक भए । भैरे, पण्डित बाजेको लौरी, चक्कर, सुकुलगुण्डा, रोमियो एण्ड मुना र चि मुसी ची । साउन ४ गते रिलिज भएकामध्ये कुनै पनि फिल्म एक साता पनि हलमा टिकेनन् ।
दोस्रो साता सार्वजनिक भएकामध्ये रोमियो एण्ड मुनाले केही हलमा शो पाइरहेको छ । फिल्म प्रदर्शनमा आएको दोस्रो, तेस्रो दिनदेखि करोड प्लस कलेक्सन देखाउने ट्रेन्ड बनेको थियो । बक्स अफिस सञ्चालनमा आए यता भने कुनै पनि फिल्मको कलेक्सन रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छैन । यो तौर तरिका हेर्दा बक्सअफिस प्रणाली कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको आभाष समेत हुन थालेको छ ।
युजर कोडका आधारमा आफ्नो फिल्मको टिकट बिक्रीको लाइभ वा रेकर्डेड विवरण लिन सकिन्छ । पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकामा मात्र जडान गरिएको यो प्रणाली उपत्यकाबाहिर भने यो वर्षको आर्थिक मसान्त २०७५÷०७६ भित्र लागू गर्ने सरकारको तयारी छ ।